कसरी इन्स्टाग्राममा निजी खाताहरू हेर्ने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
इन्स्टाग्राममा निजी खाताहरू कसरी हेर्ने
सम्पादकको पिक फेब्रुअरी 20, 2021 फेब्रुअरी 19, 2021 सारा टेलर अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
जब सामाजिक प्लेटफर्महरू विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ अनावश्यक गोपनीयता उल्ल .्घनको जोखिम बढी हुन्छ।
जबकि अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, यसले तिनीहरूलाई उनीहरूको इन्स्टाग्राम खाता निजी बनाउन विकल्प प्रदान गर्दछ, यदि उनीहरू चाहन्छन्।
यदि उनीहरू पहिले नै तपाईंलाई चिन्छन् भने प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको अनुरोध स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
हालसालैका वर्षहरूमा फोटोहरू र भिडियोहरू साझा गर्नको लागि इन्स्टाग्राम सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मध्ये एक भएको छ। प्रत्यक्ष भिडियो जस्तै नयाँ थपिएको सुविधाहरूको कारण, IGTV, इन्स्टाग्राम रीलहरू, फिल्टर र अधिक धेरै चीजहरू। यो प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ, विशेष गरी किशोर किशोरीहरूका लागि, सारा विश्वभर।
निजी इन्स्टाग्राम खाता भनेको के हो?
मानिस जसले दृश्य सामग्री साझा गर्न चाहान्छन्, तर केवल सीमित संख्याको व्यक्तिको साथ, निजी इन्स्टाग्राम खाताहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
मानिस जसले दृश्य सामग्री साझा गर्न चाहान्छन्, तर केवल सीमित संख्याको व्यक्तिको साथ, निजी इन्स्टाग्राम खाताहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं यो मैन्युअल रूपले तपाईंको प्रोफाईलको दृश्यता इन्स्टिग्राम अनुप्रयोगमा सेटिंग्स मेनू मार्फत सेट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंको प्रोफाईलसँग अनावश्यक कुराकानी गर्न रोक्छ र व्यक्ति तपाईलाई सार्वजनिक खाता प्रयोग गरी सकेसम्म सजिलै सम्पर्क गर्न सक्नेछैन। प्रोफाइलमा साझा गरिएको सामग्री कसले देख्दछ र सन्देश मार्फत तपाईंसँग सम्पर्क गर्न सक्दछ भन्नेमा खाता मालिकसँग पूर्ण नियन्त्रण छ। यो केवल ती व्यक्तिहरूद्वारा उपलब्ध छन् जसको मालिकले यसलाई राख्न चाहन्छ। यसमा के छ भनेर पत्ता लगाउन व्यक्तिले खातामा अनुसरण अनुरोधहरू पठाउन आवश्यक छ। एक पटक मालिकले अनुरोध स्वीकार गरे, अनुयायीहरूलाई पूरा प्रोफाइल जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
यस मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई निजी इन्स्टाग्राम खाताहरू हेर्न र सरल तरिकाले तिनीहरूको सामग्री पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ।
निजी इन्स्टाग्राम खाताहरू कसरी हेर्ने?
गुगलमा इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्तानाम खोजी गर्नुहोस्
एक व्यक्तिको निजी इन्स्टाग्राम प्रोफाइल फेला पार्ने एउटा तरिका गुगलमा उसको प्रयोगकर्तानाम खोज्नु हो। तपाईंले हेर्न चाहानु भएको इन्स्टाग्राम प्रोफाइलको नाम लेख्नु पर्छ। त्यसो भए गुगलमा त्यो नाम खोजी गर्नुहोस्। जब प्रोफाइल सार्वजनिक हो, त्यहाँ अझै राम्रो मौका छ कि त्यहाँ तपाईंको गन्तव्य खाताको डिजिटल ट्र्याकहरू हुनेछन् जब देखि गोपनीयता तपाईंको खातामा सक्रिय गरिएको छैन। तपाईको खाताबाट सूचनाको केहि सानो टुक्रा गुगल छविमा उपलब्ध हुन सक्छ। तपाईं कम से कम इंस्टाग्राममा तपाईंको प्रोफाइल फोटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोफाइल फोटोहरू गुगल जस्ता खोजी ईन्जिनहरूमा हेर्न सजीलो हुन्छ। अन्यथा, तपाईं फेसबुक, ट्विटर वा अन्य असुरक्षित सामाजिक खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र सजीलो पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ त्यो प्रयोगकर्ता जानकारी।
प्रयोगकर्तालाई अनुसरण अनुरोध पठाउनुहोस्
कुनै व्यक्तिको निजी इन्स्टाग्राममा जासुसी गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका मध्ये एक खातामा सिधा अनुरोधहरू पठाईएको हो। यदि उनीहरू पहिले नै तपाईंलाई चिन्छन् भने प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको अनुरोध स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
जहाँसम्म, यदि तपाईंको अनुरोध तुरून्त स्वीकार गरिएको छैन, वा प्रयोगकर्ताले यसलाई अस्वीकार गर्दछ भने, त्यहाँ अन्य केहि तरिकाहरू छन् तल तल अनुरोध स्वीकार।
कृपया प्रयोगकर्तालाई अनुसरण अनुरोध पठाउँदा कुर्नुहोस्। प्रयोगकर्ता आफ्नो खातामा धेरै सक्रिय छैन, र केहि दिनको लागि पेन्डि follow अनुगमन अनुरोधहरू हेरिरहेको छैन। पेन्डिंग अनुरोध सेक्सनहरू केहि व्यक्ति द्वारा बेवास्ता गरिएको छ, त्यसैले तिनीहरू केहि समयको लागि ध्यान दिएर जान सक्छन्।
यदि केहि दिन बितिसकेको छ र तपाईंको अनुरोध स्वीकार गरिएको छैन भने, तपाईं तत्काल सन्देश विकल्प मार्फत प्रयोगकर्तालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। डीएम मार्फत एउटा सन्देश पठाउनुहोस् र उनीहरूको खाता अनुसरण गर्नमा तपाईं किन रूचि राख्नुहुन्छ बताउनुहोस्, आफ्नो परिचय दिनुहोस् र व्यक्तिले कुराकानीको समयमा रुचि देखाउँदछ कि भनेर हेर्नुहोस्। केही व्यक्तिहरू अपरिचितहरूबाट आवेदनहरू स्वीकार नगर्ने दृढ संकल्प गर्दछन्। त्यसैले यो राम्रो विचार हुन सक्छ पहिले त्यो व्यक्ति संग कुराकानी गर्न।
यदि तपाईलाई कतैबाट प्रयोगकर्ता थाहा छ भने, आफैंको बारेमा बताउन र कहाँ वा कहिले तपाईलाई भेट्नु भयो सम्झनु उत्तम हुन्छ।
एक व्यक्तिको निजी इन्स्टाग्राम प्रोफाइल फेला पार्ने एउटा तरिका गुगलमा उसको प्रयोगकर्तानाम खोज्नु हो।
नक्कली इन्स्टाग्राम खाता बनाउनुहोस्; यदि तपाईं प्रयोगकर्तामा रुचि राख्नुहुन्छ भने
यदि माथिका विधिहरूले तपाईंको लागि काम गर्दैन भने, तपाईं पनि एक नक्कली इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो विधि पूर्ण अनैतिक छ र यसको प्रयोगले तपाईंलाई समस्यामा पार्दछ। त्यसकारण सावधान हुनुहोस् र यो विकल्प आफ्नै जोखिममा प्रयोग गर्नुहोस्।
एक महिला प्रयोगकर्ता नामको साथ नक्कली इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्न धेरै सहयोगी हुन सक्छ तपाईंको अनुरोध स्वीकार गरिएको हुन सक्छ। तपाईंको प्रोफाइललाई यथासक्दो वास्तविक रूपमा हेर्नुहोस्, महिला-अनुकूल नाम राख्नुहोस् र महिला केन्द्रित सामग्री साझा गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि, तपाईं भर्खरको प्रवृत्ति हेर्न सक्नुहुन्छ जुन महिला प्रभावकारीहरू बीच लोकप्रिय छन् र तपाईंको खातालाई तदनुसार व्यवस्थित गर्नुहोस्। नक्कली कम्पनहरू पठाउन धेरै सार्वजनिक प्रोफाइलहरू र केहि विश्वासिलो साथीहरू पछ्याउनुहोस्। एक पटक प्रोफाइल सेट अप भएपछि, लक्षित प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुवर्ती अनुरोध पठाउनुहोस्।
एक इन्स्टाग्राम खाता दृश्यकर्ता उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
यदि माथिका सबै विधिहरू असफल भएमा, तपाईं तेस्रो-पार्टी इन्स्टाग्राम निजी खाता अवलोकनकर्ता अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया सचेत रहनुहोस् कि यी साइटहरू १००% प्रामाणिक र सुरक्षित छैनन्, र तपाईं सजिलैसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको अनलाइन उपस्थिति। यी साइटहरूलाई सामान्यतया तपाइँको प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ जस्तै इन्स्टाग्राम उपयोगकर्ता नाम र लगइन पासवर्ड, र केहि तपाइँको क्रेडिट कार्ड विवरण पनि आवश्यक छ, किनकि तिनीहरूको सेवा नि: शुल्क छैन। थप रूपमा, इन्स्टाग्राम एपीआईको कडा नीति छ यसको तेस्रो पक्षलाई यसको प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डेटा पहुँच गर्न अनुमति नदिने। जहाँसम्म, तपाई सावधान रहन र यी साइटहरूमा तपाईंको जानकारी पेश गर्नु अघि दुई पटक सोच्न आवश्यक छ किनकि तपाईंको डाटा प्रक्रियामा चोरी हुन सक्छ।
सांप्रदायिक समाचार कसरी इन्स्टाग्राममा निजी खाताहरू हेर्नुहोस्
Un अनौठो उपहार विचारहरू तपाईंको परिवारलाई मनपर्दछ
डेफी endingण दिने र Expण समझाइएको